Fanesorana volo Laser Diode, rafitra fantsom-baravarankely Rf amin'ny fanjaitra micro - Sano
Fananganana hozatra EM-sculpt
Beijing Sano laser Development S&T Co., Ltd. Mpanamboatra matihanina momba ny hatsarana sy milina laser any Shina. Sano lasers dia manana ivon-toeram-pikarohana sy fampandrosoana, toeram-pitsaboana, varotra ary departemanta aorian'ny varotra; afaka manolotra ireo angona teknolojia matihanina sy angona momba ny klinika amin'ny voalohany. Afaka mitazona anao hatrany eo amin'ny sehatry ny hatsaran-tarehy foana izahay, noho ny ekipanay matihanina mifangaro amin'ny optika, milina, herinaratra ary fanafody.
Hatramin'ny 2005, miasa mafy hatrany ny Sano Laser Companyh ary manana ny zon'ny tompony tsy miankina amin'ny valan-javaboary, izay maherin'ny 100.000 m2, ary mpiasa maherin'ny 150. Manangana ny orinasan'ny sampana any Hong Kong koa izahay. Nandray anjara tamin'ny fampirantiana iraisam-pirenena isan-taona izahay. Miaraka amin'ny fiezahana dia nahazo mari-pankasitrahana fitsaboana an-trano sy iraisam-pirenena maro ny Sano laser Company noho ny fitaovany samihafa, toa ny (TUV) Medical CE, (TUV) ISO 13485, taratasy fanamarinana FDA (US); ary koa ny zon'ny fanamarinana fanafarana sy fanondranana, Fahazoan-dàlana ho an'ny Orinasa famokarana fitaovana fitsaboana ary mari-pahaizana momba ny haitao avo lenta.
Portable Q Switch Nd Yag Laser fanesorana tatoazy p ...
2021 Hery lehibe mivarotra mafana Picosecond Laser Pr ...
Masinina manamafy ny hoditra RF microneedling RF nee ...
Ems Factory Wholesale Muscle Sculpt Handoro Fat ...
Fananganana hozatra sy milina fanalefahana vatana
Valin'ny halavan'ny Triple (755nm / 808nm / 1064nm) diode l ...
P-Mix 755 + 808 + 1064nm diode fanesorana volo laser ...
Masinina hozatra manangana EMSculpt
milina fananganana hozatra EM-sculpt azo entina
Ny mpaninjara manokana any Torkia ho an'ny Las ...
Miarahaba anao noho ny fiaraha-miasanay amin'ny mpaninjara manokana an'i Torkia ho an'ny milina fanesorana volo tamin'ny laser tamin'ny 10 Oktobra 2018 ka hatramin'ny 10 Oktobra 2022! Ho an'ireo mpanjifa Irana izay liana amin'ny masinina fanesorana volo amin'ny laser, azafady mifandraisa amin'ilay mpaninjara manokana an'i Iran.
1: anarana freckle ： Age ： 21. asa: famantarana ny mpianatra: miavaka amin'ny teboka mavo na volontany mainty, boribory, boribory na tsy ara-dalàna. Mazava ny fari-tany, manodidina ny 2mm ny savaivony, malama ny faritra, mitokana ary tsy mitambatra, ary hafa ny fizarana. famaritana ： freckle Fandinihana pathological ： Manaitra ny marary ...
Fampirantiana Laser Sano
Ny orinasa Sano Laser dia manatrika fampirantiana any Dubai, Espana, Italia, Torkia, Polonina ary Romania isan-taona. Ity dia sary rehefa manatrika ny India Exhibition isika. India no tsena lehibe ao amin'ny orinasanay. Manana mpizara be dia be izahay any India. Ary tonga any India in-3-4 isan-taona izahay. Ao amin'ny fampirantiana Torkia, ny laser diode, hoditra mangatsiaka ary picosecond Nd yag laser ma ...
Co2 Laser Laser miato, Shr Ipl Opt, Laser estetika Co2, Masinina mpanentana hozatra Ems, Fanesorana volo Shr Opt Ipl, fanesorana ny holatra,